MediaLight Mk2 Eclipse 1m 6500K CRI 98 Fanazavana Bias - Jiro MediaLight Bias
Home MediaLight Mk2 Eclipse 1 Meter (Ho an'ny fampisehoana solosaina)
Mitahiry hatramin'ny $0.00 Save $ -32.95
product.variants.choose_variant Tsia (ny Eclipse dia efa tonga miaraka amin'ny dimmer tsy lavitra) - $ 32.95 Eny, ampio fanaraha-maso lavitra infrared sy dimmer (+ $ 8.95) - $ 41.90 Eny, ampio dimy MagicHome WIFI ho an'ny fitaovana iOS sy Android, mifanaraka amin'ny Alexa sy Google Home (+ $ 9.95) - $ 42.90
Tsia (ny Eclipse efa tonga miaraka amin'ny dimmer tsy lavitra) Eny, ampio fanaraha-maso lavitra infrared sy dimmer (+ $ 8.95) Eny, ampio maody MagicHome WIFI ho an'ny iOS sy ny fitaovana Android, mifanaraka amin'ny Alexa sy Google Home (+ $ 9.95) Manampy fanaraha-maso lavitra?
Ny andiana MediaLight Mk2:
Jiro optimum ho an'ny horonantsary manakiana
Mijery tontolo iainana
Tsy ny fahazoana an'io fitifirana tonga lafatra io fotsiny; io koa dia ny hahazoana antoka fa izay hitanao eo amin'ny efijery dia marina izay ho hitan'ny hafa rehefa mijery ny asanao ianao. Izany no antony namolavolanay ny vokatray amin'ny fahitsiana ao an-tsaina - amin'izay ianao afaka matoky fa ny antsipiriany rehetra amin'ny tetikasanao dia ho soloina tsara amin'ny fitaovana hijerena rehetra.
Ny MediaLight Mk2 Series dia novolavolaina mba hanomezana vahaolana maivana, simulated D65 "dim manodidina" vahaolana maivana ho an'ny sinema ao an-trano sy fampiharana fanovana horonantsary matihanina.
The Mk2 Eclipse Ny 1m dia mampifangaro CRI avo indrindra sy marim-pototra amin'ny mari-pana loko miaraka amin'ny fahafaha-manao sy mora entina amin'ny rafitra jiro LED bias USB. Ny fihenan'ny loko sy ny fanamafisana eo noho eo dia manome antoka fa ny hazavanao manodidina dia lasibatra foana.
Ny vokatra MediaLight Mk2 Series rehetra dia mizara fizarana herinaratra D65 mitovy amin'izany, misoroka ny olana mifandraika amin'ny fahitana sy manome antoka ny jiro tsy tapaka sy azo fehezina. Manafatra MediaLight ary jereo ny fahasamihafana ho anao.
Famaritana MediaLight Mk2:
Misy dimmer PWM (misy fanaraha-maso lavitra amin'ny vidiny fanampiny)
Peel sy stick sticky 3M tena marina
Atoro ho an'ny fampisehoana rehetra, ao anatin'izany ny High Dynamic Range (HDR)
4.9 Miorina amin'ny 61 Reviews
Jiro mitongilana be
Vokatra lehibe, serivisy ho an'ny mpanjifa manokana.
Tsia (ny Eclipse efa tonga miaraka amin'ny dimmer tsy lavitra)
Fividianana MediaLight faha-3. Tsy te hiaina tsy misy.
Nampiasa an'io habe 1 metatra io aho mba hampazava ny fahitalavitra LG 55na ambony latabatra. Ny tsipika iray manerana ny afovoany dia miasa tsara satria misy elanelana kely amin'ny rindrina. Raha nitaingina rindrina ny fahitalavitra dia mila mandeha amin'ny habe lehibe kokoa aho handrehitra jiro mitovy azy. Izaho koa dia manana ny haben'ny 1 metatra mitovy amin'ny fampisehoana solosaina ViewSonic 24 "(eo amin'ny latabatra ihany koa), izay ahafahany mametaka lamina toradroa. Tiavo izy ireo amin'ny fiasana amin'ny zavatra amin'ny jiro ambany na mijery sarimihetsika maty jiro. Vokatra sy fanohanana tsara!
Salama, Steven! Te-hanamarika fotsiny aho fa rehefa mijoro ny fahitalavitra dia tsy voatery mila mihodina amin'ny sisin'ny seho ianao. Nampiasako ny eklipse 1 metatra antsika tamin'ny fahitalavitra 55 santimetatra teo amin'ny laharana ary tsara ny vokany. Ny manodidina azy somary manjavozavo (na halo / mamirapiratra araka ny fiantsoan'ny sasany azy) dia miafara ho malefaka kokoa ary mivelatra kokoa. Rehefa akaiky kokoa ny jiro, dia toa voafaritra kokoa ny manodidina. Na mandeha. Ny fomba ananananao azy dia ilay antsoiko hoe jiro mahazatra "Ideal-Lume" mahazatra (ilay marika fanaovan-jiro mitongilana matihanina izay nanomboka 20 taona lasa teo ho eo). Teboka iray hafa manamarika eto. Misy loko kely ho azy ao amin'ny loko anao. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny fanalavirana ny sisiny dia mety ho tombony tokoa. Tianay ny hisoroka ny fisongadinan'ny speculate (taratry ny fitaratra toa ny fitaratra) an'ny LED tsirairay. Amin'ny alàlan'ny fijanonana lavitra lavitra toy ny nataonao dia azonao antoka fa izany no izy. TL; DR Tsy mila mivezivezy amin'ny sisiny ianao rehefa mijoro ny fahitalavitra. Na izany aza, ny fijery dia somary sekoly taloha kokoa, miaraka amin'ny "fetra" malefaka kokoa.
Vokatra mahafinaritra, Orinasa mahatalanjona
Ny jiro bias nataoko teo amin'ny monitor ahy dia nanova ny zavatra niainako. Tsy fantatro akory hoe nisy io vokatra io ary inona no tsy ampy amiko. Tena nahaliana ahy manokana ny nanamarinan'i Jason mailaka azy manokana mba hahazoana antoka fa faly tamin'ny vokatra nataoko aho. $ 60 fotsiny no laniko! Na izany aza, handany bebe kokoa aho rehefa manampy mpanara-maso bebe kokoa amin'ny fametrahana ahy. Ny toerana tokana hizahako jiro mitanila dia ny MediaLight. Izany no atao hoe serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny fomba fahazoanao mpanjifa mandritra ny androm-piainana. Misaotra Jason sy ny ekipa iray manontolo. Peter Axtell
Tsy misy areti-maso intsony!
Ny hazavana MediaLight Mk2 Eclipse 1 Meter dia manamora ny fahitana ny fanaraha-maso ny solosainako ao amin'ny efitrano maizina. Tokony hanana iray avy amin'ny andro voalohany. Tsy afaka miala ao an-trano raha tsy misy izany. Tena tiako ny fahazavana MediaLight Mk2 Eclipse 1 Meter.
Mendrika tsara ny Monitor Bias Light!
Tsy nino ny jiro 6500k aho satria flashlight nerd ary matetika maneso ny zavatra mangatsiaka mihoatra ny 5,000k ... saingy tsy azoko lavina ny siansa ao ambadik'ity fananganana ity. CRI avo indrindra izy io ary fotsy FLAT tanteraka tsy misy manga. Mahagaga.
Eny, ampio fanaraha-maso lavitra infrared sy dimmer (+ $ 8.95)